Varotra ivelany : vitsy ny miasa ho an’ny fanondranana entana | NewsMada
Varotra ivelany : vitsy ny miasa ho an’ny fanondranana entana
Maivana ny vokatra aondrana miala eto Madagasikara mankany ivelany, efa ampolo taona maro. I Madagasikara, mpikambana ao amin’ny tsena iraisam-pirenena betsaka, toy ny Sadc, Comesa, COI, ankoatra ny lalam-barotra any Eoropa, Amerika, Azia. Ny antony, raha ny fahitan’ny ITBM (International trade board of Madagascar) azy, vitsy loatra ny orinasa miasa ho an’ny fanondranana entana ; kely loatra ny vokatra eto an-toerana ; tsy ampy ny lalam-barotra hitan’ny mpandraharaha eto an-toerana. Noho izany rehetra izany, kely loatra ny vola miditra (vola vahiny) ho an’ny firenena iray, toa an’i Madagasikara, manana ny ampy hifaninanana ho an’izany varotra ivelany izany.
Manana ny ampy eto Madagasikara, manomboka amin’ny vokatra azo trandrahina. Efa fanta-daza amin’ny tsena any ivelany ny vokatra avy eto amintsika, ohatra, ny kakao, akamba, letisia, akanjo, sns. Betsaka ny olona manampahaizana afaka miasa, sady tanora. Afaka miantoka tsara ny tinady ilain’ireo firenena maro isika, indrindra ny vokatra avy amin’ny fambolena, asa tanana.
Betsaka ny sakana
Izany rehetra izany anefa, takona, tsy fantatra, voasakana noho ny faharatsian’ny fotodrafitrasa, tsy fahampian’ny angovo, miampy ny kolikoly sy sakantsakana samihafa any anivon’ny sampandraharaham-panjakana. 33 % ny sakana eo amin’ny fandraharahana any anivon’ny asam-panjakana. Manampy izany ny olana amin’ny fitaterana, raharaha ara-bola, tsy fandriampahalemana, sy mbola misy antony hafa.
Na izany aza, hita ankehitriny fa misy ny ezaka ataon’ny mpandraharaha sy fikambanana (Gem, Sim, Fivmpama) ny hitrandraka ireo tsena misy antsika. Manodidina sy tsy lavitra, ny Comesa, Sadc, COI, ao koa ireo firenena aziatika. Efa misy aty Afrika manana politika manokana momba izay tsena ivelany izay. I Madagasikara, noho izany, tokony hamaritra mazava aiza ny hifantohana, hanaovana fanadihadiana manokana momba ny lalam-barotra rehetra. Tokony ho fantatry ny eto an-toerana tsara ny firenena sy ny olona hifampiraharahana.